watchOS 8.4 RC dia mamaha ny olan'ny fiampangana Apple Watch | avy amin'ny mac aho
Hojerentsika raha ity no farany. Efa nilaza izahay isaky ny mamoaka fanavaozana watchOS vaovao i Apple izay mampiditra ny vahaolana amin'ny isan-karazany lesoka fametahana an'ny Apple Watch. Ary hita fa nandany ny famahana ny olana izy ireo.
Omaly ny orinasa dia namoaka watchOS 8.4 amin'ny dikan-teny Afaho ny mpifaninana. Ary toa mamaha ny olan'ny fiampangana bateria izay ianjadian'ny mpampiasa sasany ity iray ity. Amin'ny herinandro ho avy rehefa hivoaka ho an'ny rehetra izany dia hojerentsika.
Hatramin'ny omaly dia afaka misintona izao ireo mpamorona sy mpanandrana beta nisoratra anarana tao amin'ny programa fampandrosoana watchOS watchOS 8.4 RC ao amin'ny Apple Watch. Toa io fanavaozana io ihany no mamaha olana mitohy izay mety hahatonga ny charger Apple Watch tsy hiasa tsara amin'ny Apple smartwatch.
Volana lasa izay mampahafantatra izahay momba ny fitomboan'ny olana momba ny fiampangana izay atrehin'ny tompon'ny Apple Watch Series 7. Hatramin'ny watchOS 8.3 dia nisy ny fitarainana maro momba ny fiampangana Apple Watch tsy miasa amin'ny chargers an'ny antoko fahatelo.
Ho an'ny mpampiasa maro, ny charger Apple tsy ofisialy dia nanana olana tamin'ny fiampangana a Apple Watch Series 7, tsy nampitondra entana izy ireo na raha nanao izany tamin'ny voalohany ary nijanona rehefa afaka minitra vitsivitsy.
Ny fitarainana dia tonga niaraka tamin'ny charger isan-karazany: manomboka amin'ny charger an'ny antoko fahatelo mora, ka hatramin'ny avo lenta toa an'i Belkin. Ny olona sasany aza dia nanana olana momba ny fiampangana tamin'ny kapila fiampangana Apple Watch tany am-boalohany.
Araka ny naoty navoaka momba ny vaovao ao amin'ny watchOS 8.4 fanavaozana, ny lozisialy dia mamaha ny bug izay mety hahatonga ny sasany Apple Watch charger tsy mandeha, ary milaza fa ny olana dia hifarana rehefa watchOS 8.4 navoaka tamin'ity herinandro ity. ho an'ny mpampiasa rehetra. Ho hitantsika eo raha toa ka voavaha izy ireo amin'ity indray mitoraka ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple Watch » watchOS 8.4 RC dia mamaha ny olana momba ny fiampangana Apple Watch
Apple dia manaisotra ny fanamarinana Unidays amin'ny fividianana mpianatra